Pedro Sánchez ayaa Tim Cook kula kulmay Apple Park | Waxaan ka socdaa mac
Pedro Sánchez ayaa Tim Cook kula kulmay Apple Park
Madaxweynaha Dowladda Spain Pedro Sánchez Wuxuu joogay Apple Park usbuucii hore. Isaga oo ka faa’iideysanaya safarkiisa Mareykanka, hantiwadaagga ayaa kula kulmay Tim Cook xarunta Apple.
Waxa ku soo kordhay saxaafadda waa inay ka wada hadleen dhaqaalaha iyo Qorshaha Soo Kabashada shirkadaha ka dib faafida. Ma ogin in Cook uu madaxweynaha u soo bandhigay hadiyad. Laakiin isagoo og "bakhaylnimada" caadiga ah ee sumadda, Sanchez weli wuxuu filayay MacBook Pro wuxuuna ka qaatay biin tufaax ah dhabarka jaakadda ... Layaabi maayo gabi ahaanba ...
Maamulaha Apple, Tim Cook, ayaa kula kulmay Pedro Sánchez, Madaxweynaha Dowladda Spain, xarunta Apple Park ee ku taal Cupertino usbuucii hore. Agaasimaha guud iyo madaxweynaha ayaa ka wada hadlay "isbadalka dhijitaalka ah" iyo mowduucyo kale intii uu socday kulanka, sida uu siyaasiga Isbaanishka markii dambe sharaxay.
Sánchez ayaa lagu daabacay tirinta rasmiga ah Twitter oo mid ka mid ah la lahaa agaasimaha guud ee Apple. Labada ayaa lagu soo waramayaa in ay ka wada hadleen Qorshaha Soo-kabashada, mashruuc maalgashi oo ay Dowladda Spain ku sameyso dhaqaalaheeda si ay uga caawiso soo kabashada Covid-19.
Kulan wax ku ool ah oo lala yeeshay Tim Cook ee Cupertino. Isbaanishku wuu ogyahay in isbedelka dhijitaalka ah uu yahay mid mudnaanta leh isla markaana Qorshaha Soo-kabashada uu na siinayo fursad qaas ah oo aan ku wajaho caqabadan Ma jirto munaasabad ka wanaagsan oo shirkadaha waaweyn ee tikniyoolajiyadda sida Apple ay maal-gashadaan dalkeenna.
Sánchez wuxuu booqanayaa Mareykanka si uu u dhiirrigeliyo shirkadaha Isbaanishka waxna uga qabto cudurka iyo tallaalada socda ee COVID-19, iyo arrimaha kale ee gobolka. Intii uu ku guda jiray safarkiisa, wuxuu kaloo la kulmay madax ka socota Bank of America, Morgan Stanley y Blackstone.
Waxaa caado u aheyd Cook inuu si joogto ah ula kulmo saraakiisha sarsare ee siyaasada inta uu xilka hayo Agaasimaha Apple, inkasta oo kulamadani ay joojiyeen qabashadoodii masiibada farxadeed awgeed. Waxay umuuqataa in tartiib tartiib aan ugu laabanayno caadiyan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » dhowr » Pedro Sánchez ayaa Tim Cook kula kulmay Apple Park
Waxa ugu fiican 'Central Park' ayaa ka muuqda guddiga Comic-Con
Gurman wuxuu leeyahay Face ID wuxuu garaaci doonaa iMac sanadka 2023